Masuuliyiinta dowladda oo ka qeyb ah halganka nadaafadda Muqdisho (SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Masuuliyiinta dowladda oo ka qeyb ah halganka nadaafadda Muqdisho (SAWIRRO).
Masuuliyiinta dowladda oo ka qeyb ah halganka nadaafadda Muqdisho (SAWIRRO).
Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Benaadir ayaa si wadajir ah u sameeyey Olalaha Nadaafadda Caasimadda, kaas oo lagu aruurinayo qashinka yaala goobaha aan loogu tala galin iyo wadooyinka magaaalda Caasimadda ah.
Ku-simaha R/Wasaaraha ahna R/Wasaare ku-xigeenka Dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada iyo qeybaha bulshada ayaa wadajir olalahan uga sameeyey goobo kamid ah Muqdisho.
“Caasimada dalka ee Muqdisho waa muraayada iyo halka laga qiimeeyo dal walba, sidaas daraadeed maanta waxaan u istaagnay inaan nadaafadda ka shaqeyno, taas oo ah waa waajib diini ah oo nooga wada baahan inaan ka wada shaqeyno”.Ayuu yiri Guddoomiye Yarisow.
Madaxda ayaa dhiirigeliyey shaqaalaha dawladda iyo shacabkii howshan ka qeyb qaatay, iyadoo wadajir loogu baaqay muhiimadda ay leedahay inay ilaaliyaan nadaafada dalka iyo bilicda wadanka si loo helo deegaan nadiif ah.
Dhamaan xarumaha dawlada iyo degmooyinka Muqdisho ayaa laga sameynayaa Ololahan nadaafadeed, iyadoo ay Xukuumadda iyo Maamulka gobolka Benaadir hormuud u yihiin isu soo baxan lagu nafiifinayo bilicda Caasimadda.
Previous article Ra’iisal Wasaare kuxigeenka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Dowladda Britain u fadhiya Soomaaliya.
Next articleGolaha amniga Muqdisho oo qodoba ka soo saaray kulan eey yeesheen.